Mmezu nke Apple Pay na South Korea na - aga nwayọ karịa ka a tụrụ anya ya | Esi m mac
Applekwụ ụgwọ na-aga n'ihu na ọnụọgụ dị iche iche dabere na mba na-akwado ọrụ ahụ. Mmezu ya dabere n'ọtụtụ ihe, mana ndị bụ isi bụ ọnụọgụ kọmputa kọmputa Apple na mba ahụ na nkwekọrịta ya na ụlọ ọrụ ego. Izu a anyị mụtara na Ọrụ ịkwụ ụgwọ Apple gafere PayPal na United States, n'ihi na kwa ọnwa, ụlọ akụ ọhụrụ na-esonye na nkwado Apple Pay maka akaụntụ akụ ha yana ọbụlagodi usoro azụmahịa dị iche iche na-akwado ịkwụ ụgwọ site na nkwụnye ụgwọ ha. Na Europe, ọnụego ahụ na-adị nwayọ nwayọ kama ọ na-adịgide adịgide, ebe n'Eshia ogo mmejuputa ka dị ala.
Kpọmkwem, na Nọvemba gara aga, onye na-ahụ maka mpaghara iwu na onye ndụmọdụ a tụkwasịrị obi gara South Korea, ka ya na ndị isi ego nke mba wee nwee nzukọ. Na kọntaktị mbụ a, ha kọwara otú Apple Pay si arụ ọrụ na nzukọ ezubere na ndị na-enye kaadị mpaghara.
Na nleta nke abụọ, Apple kwesịrị ịrịọ ikikere dị mkpa iji rụọ ọrụ na kọmputa site n'aka ndị nwe obodo. O doro anya na ọbịbịa nke abụọ a emebeghị ugbu a. Dika akaebe nke onye oru kaadi na mba Asia, mkparịta ụka ha na Apple dị na mbido.
N'aka nke ọzọ, Google, etinyere karịa Apple na mpaghara ahụ n'ihi mmetụta Samsung na ụlọ ọrụ ndị ọzọ Asia, ewerela nzọụkwụ mbụ. Ọ dị na oru na ụlọ ọrụ kaadị dịka KB Kookmin, Shinhan, Lotte na Hyundai na ịkwụ ụgwọ dabere na ntanetị na NFC.
Mana uru dị ukwuu nke ndị asọmpi Apple wetara bụ teknụzụ etinyere: ha anaghị achọ nkwụnye ụgwọ nkwụnye ụgwọ na teknụzụ NFC. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ebe ịkwụ ụgwọ South Korea enweghị NFC teknụzụ ma yabụ ntinye Apple Pay dị oke ọnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Mmejuputa ego nke Apple Pay na South Korea ji nwayọ nwayọ karịa ka aturu anya